ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: September 2011
(ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ၏ ဘလော့ဂ်တွင် တင်ထားသော ဆောင်းပါးရှင် အက်ဆစ်၏ အာဘော်ကို သဘောကျ ထောက်ခံသဖြင့် ကျနော့်ဘလော့ဂ်တွင် ထပ်မံ မျှဝေဖော်ပြပါသည်။ အက်ဆစ်သည် မည်သူမည်ဝါမှန်း ကျနော်လုံးဝမသိပါ။ သို့သော် အက်ဆစ်၏ အာဘော်သည် ကျနော်၏ သဘောထားနှင့် ယနေ့အချိန်တွင် တထပ်တည်းကျကြောင်း ပြောလိုပါသည်။ (ကိုပေါ) )
အက်ဆစ်၏ အာဘော် “စစ်ကြေညာချက်”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်ရေးချင်စိတ် ကုန်ခန်းနေတာ ကြာလှပါပြီ။ သို့ပေမယ့်လည်း ဒေါ်စုဟာ မြန်မာပြည်အရေးကို ပရောဟိတ်ဆန်ဆန် အဓိပတိလိုတမျိုး၊ သူတော်ကောင်းမကြီးလိုတဖုံ၊ ငြိမ်း ချမ်းရေးမိခင်ကြီးလိုတသွယ် မိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တာလိုတနည်းနဲ့ အသုံးချလုပ်ကိုင်နေတာတွေကို မခံရပ်နိုင် တဲ့အဆုံး အခုလိုစာတွေ ထပ်ရေးဖြစ်ရတာပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ရွှေလမ်းငွေလမ်းဖောက် နေချိန်မှာ ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ကိစ္စတွေ မပေါ်ပေါက်စေချင်တဲ့ ဒေါ်စုကို တာဝန်သိအောင်တော့ ပြန်လည်ပြော ချင်နေခဲ့တာပါ။ ဒါဟာလည်း ဒေါ်စုကို ချစ်လို့မုန်းလို့မဟုတ်ဘဲ ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ ပြည်သူတွေ၊ လွတ်မြောက် ရေးကို မျှော်လင့်နေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ မဆုတ်မနစ် ချီတက်နေကြတဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ပြည် တွင်းပြည်ပက မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေး လုပ်ဆောင်နေသူတွေနဲ့အတူ ရပ်ခံနေချင်တဲ့ အက်ဆစ်ရဲ့ စိတ် ဆန္ဒတွေကြောင့်ပါပဲ။
ဒေါ်စုရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ တရားလွန်နေပြီလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ ၂၃ နှစ်တာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ကာ လအတွင်း ပြည်သူတွေရဲ့သွေးတွေ၊ ချွေးတွေ၊ ဒုက္ခတွေ၊ သောကတွေကနေ ရလာတဲ့ ကျော်ကြားမှုတွေကို ခု တုံးလုပ်ပြီး ဒီကနေ့မှာ ပြည်သူကို သစ္စာဖောက်နေပြီလို့ပဲ ခပ်ရှင်းရှင်းဆိုလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။ ဒေါ်စုကို တာ ၀န်သိအောင်လို့ ပြောလိုက်တော့ အက်ဆစ်ဆိုတဲ့ မင်းကကော ဘယ်လောက် တာဝန်တွေယူပြီးလို့လဲလို့ ဆို နိုင်ပါတယ်။
“အခုဆိုရင် ဒေါ်စုဟာ နောက်ဆုံးဇရာပိုင်းကို ရောက်လာခဲ့ပြီ။ တိုင်းပြည်မှာ အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် အစိုးရ ၆ ဆက်လောက် ပြီးသွားတော့မယ့်အချိန်မှာ သူကတော့ စစ်အာဏာရှင်ဆီမှာ လက်ဝါးဖြန့်တောင်းနေတုန်းပါပဲ။ လူထုတိုက်ပွဲကိုလည်း မယုံကြည်၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကိုလည်း အားမပေးနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ဘေးတိုက် လိုက်ပါနေတာပဲ တွေ့နေရပါတယ်။”
သေချာတာက အက်ဆစ်ဟာ ပြည်သူကပေးထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေ ရထားသူမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူ ပေးတဲ့တာဝန်တွေ ကျေစေရပါမယ်ဆိုတဲ့ ကတိစကားတွေ ပေးထားသူမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူကို အဓိပတိကြီး လိုလုပ်ပြီး အပေါ်စီးကနေ မောက်မောက်မာမာ မချေမငံ မစော်ကားခဲ့၊ မသရော်ခဲ့တာလည်း အမှန်ပါ။ အထူး သဖြင့် လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ တာဝန်ကို မယူထားဘူးဆိုပါတော့။ ဒီတော့ လူထုခေါင်းဆောင်တာဝန်ကို ယူထားသူကတော့ အက်ဆစ်ထက် ပိုပြီးတာဝန်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ ငြင်းချင်သူရှိလည်း ငြင်း နိုင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲသလို သဘောထားကွဲလွဲခွင့် ရှိတဲ့အလျောက် လည်း သာမန်လူဖြစ်တဲ့ အက်ဆစ်က မိမိဆန္ဒကို အခုလို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်လိုက်တာပါပဲ။ ဒီတော့ စာ ရေးသူရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို စာဖတ်သူတွေကသာ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ဆိုတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ဂုဏ်ပုဒ်ကို ရယူထားသူကတော့ လူထုနဲ့ကင်းကွာတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့မ ရတာ သေချာပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုအလွန့်အလွန်ကြီးမားတဲ့ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ မ၀ရေစာ စားပြီး လူဖြစ်နေရသူတွေပါ။ မြန်မာပြည်သူတွေက တပါတီအာဏာရှင်ကို မကြိုက်လို့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ လူထုအုံကြွမှု လုပ်ခဲ့ပြီး အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချခဲ့တယ်။ အဲဒီ လူထုရဲ့အာဏာရှင်ဆန်ကျင်ရေးလှိုင်းလုံးကြီးကို အခန့်သင့်စီး လာပြီးမှ လူထုထက် ပိုသိတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ၊ လူထုဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုသူတွေ၊ လူထုကို ဘာမှ ဦးဆောင်မှု မပေးနိုင်သူတွေဟာ လူထုရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို မလွဲမသွေခံရမှာကတော့ အသေအချာပါပဲ။ ဒီထဲမှာ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် မပါစေချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ခရီးသွားလမ်းကြုံရင်း ပါလာခဲ့တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါ။ အနစ်နာခံခဲ့ရတာတွေ ရှိခဲ့သလို အရင်က ပြောရဲဆိုရဲတွေရှိခဲ့လေတော့ ဗိုလ်ချုပ်သမီး ဆိုတဲ့အသိနဲ့ လူထုက ချစ်ခင်လေးစားခဲ့တာပါ။ အနစ်နာခံရတယ် ဆိုပေမယ့် တခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထက်တော့ သူက ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ခဲ့ရသူပါ။
တကယ်တမ်း မြန်မာပြည်သူလူထု လိုချင်တာက သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေး မယ့်ခေါင်းဆောင် (တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူ) တွေကို လိုချင်ခဲ့တာပါ။ ၂၃ နှစ်ကာလကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင် ဒေါ်စုမှာ အဲဒီအရည်အချင်းတွေ ပါလာခဲ့ပုံမရပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့မှာ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ မရှိခဲ့ဘူး။ လုပ်နိုင်စွမ်းအားနည်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ လုပ်ကိုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသူဆိုတာ ဒီကနေ့ကာလမှာ သက် သေပြနေပါပြီလေ။ သူ့အနေနဲ့ မြန်မာလူထုနဲ့ နိုင်ငံတကာက ထောက်ခံတဲ့ အားတွေ နည်းနည်းနောနော ရခဲ့ တာမဟုတ်ပါဘူး။ နိုဘယ်ဆုအပါအ၀င် သူရရှိခဲ့တဲ့ ဆုပေါင်းများစွာဟာ သူတော်ခဲ့လို့၊ သူတတ်ခဲ့လို့၊ သူအနစ် နာခံခဲ့လို့ ဆိုတာထက် ဖိနှိပ်မှုရက်စက်မှုယန္တရားကြီးအောက်မှာ စတေးခံနေရတဲ့ မြန်မာလူထုတွေရဲ့ သရုပ် သကန်တွေကြောင့်ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလ်ိမ့်မယ်။ အသက်တွေ၊ သွေးတွေ၊ ချွေးတွေ၊ သောကတွေ၊ ပူပန်မှုတွေနဲ့ သွန်းထုလုပ်ထားတဲ့ ရွှေစင်ရုပ်တွေက သူ့ရင်ဝအနီးမှာ ရောက်ရှိလာကြတာပါ။
ဒေါ်စုရဲ့ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်တွေဟာ အချိန်ကာလအလိုက် တခုချင်း ပြောင်းလဲနေပြီး တခုခုကို စောက်ချ လုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုးမရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ သူဟာ လူထုကို နိုင်ငံရေးပရောဟိတ်ကြီးလို တရားပြ ဟော ကြားပြီး ဇွဲရှိဖို့၊ အနစ်နာခံဖို့၊ ညီညွတ်ဖို့ ဆိုခဲ့ပေမယ့်လည်း သူပြောထားတာတွေနဲ့ ညီအောင် သူမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ ဘူး။ သူ့ရဲ့တလျှောက်လုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာ သူဟာ ဘာကိုမှ အဆုံးသတ်လုပ်ဆောင်နိုင်တာ မျိုး မရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဘာအောင်မြင်မှုကိုမှ မရခဲ့ပါဘူး။ အခုဆိုရင် ဒေါ်စုဟာ နောက်ဆုံးဇရာပိုင်းကို ရောက် လာခဲ့ပြီ။ တိုင်းပြည်မှာ အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် အစိုးရ ၆ ဆက်လောက် ပြီးသွားတော့မယ့်အချိန်မှာ သူကတော့ စစ်အာဏာရှင်ဆီမှာ လက်ဝါးဖြန့်တောင်းနေတုန်းပါပဲ။ လူထုတိုက်ပွဲကိုလည်း မယုံကြည် လက်နက်ကိုင်တိုက် ပွဲကိုလည်း အားမပေးနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ဘေးတိုက်လိုက်ပါနေတာပဲ တွေ့နေရပါတယ်။
“ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် ရှိရမယ်။ အာဏာရှင် မယုံကြည်မချင်းတည်ဆောက်နေတဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွေဟာ မြန်မာလူထုကို
နေ့စဉ် ချောက်ကမ်းပါးစွန်း ရောက်အောင်လုပ်နေသလို၊ အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်ဖို့ အချိန်ကာလဆွဲဆန့်ပေးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။”
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူက သူမပါတီလက်ထဲ အာဏာကုန်လွှဲအပ်ခဲ့တယ်။ ဒါလည်း တာဝန်မ ကျေခဲ့ပါဘူး။ ဒေါ်စုဟာ ပြည်သူလွှတ်တော်ကြီးပေါ်ပေါက်ဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဖွဲ့တယ်။ ဒါကိုလည်း ပြီးဆုံးအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ရွှေဂုံတိုင် အပါအ၀င် ကြေညာချက်ပေါင်းများစွာကို ထုတ်တယ်၊ တနေ့ကို သဘောထားတမျိုးစီ ထွက်နေလို့ ပြည်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာလည်း မျက်စိလည်ခဲ့ရပါပြီ။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲစည်းပုံနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံနဲ့ဆိုလို့ မဲမပေးဘဲ မဲမသမာမှု ဖော်ထုတ်ကြသူတွေ လည်း ထောင်နန်းကို စံနေကြရပါပြီ။ သူကတော့ သူပြောဖူးတာကို အမှတ်ရပုံမပေါ်ပါဘူး။ အကျယ်ချုပ်က ထွက်လာခါစက ပင်လုံတဲ့၊ အခုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ဘယ်ဗမာကိုမှမယုံရဲတော့တဲ့ ပင်လုံဆိုတဲ့ အ ခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်သွားခဲ့ရလေပြီ။ သွေးလှူ၊ ရေဝေ၊ ရေတွင်းတူး၊ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဧရာဝတီအရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ... စသဖြင့် ရောက်တတ်ရာရာ ပြောဆိုနေလေတော့ နောက်က ထောက်ခံအား ပေးနေတဲ့ အင်အားတွေက ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသဲကွဲတော့ဘဲ အာဏာရှင်ဆန်ကျင်ရေးတွေ လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ မှေးမှိန်လာခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တနေ့မှာ ဘာခေါင်းစဉ်ပြောင်းမလဲဆိုပြီး ရင်တမမနဲ့ စောင့် နေကြသူတွေလည်း ရှိနေကြပါတယ်။
မနေ့တနေ့က ရှိသမျှ အင်အားလေးတွေကို စုစည်းပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ကမ္ဘာက သိအောင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ တဲ့ အန်အယ်ဒီက တက်ကြွသူတွေ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ၂၀၀၇ မျိုးဆက်တွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေအ နေနဲ့ ဘုရားမှာ ဆုတောင်းတာကို စေတနာကောင်းနဲ့ အားလုံးကောင်းဖို့လုပ်တာ ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး ပေါ့ ပျက်ပျက်ပြောခဲ့တာကြောင့် လူထုတိုက်ပွဲကိုပျယ်ရယ်ပြုတာလားဆိုပြီး ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ် သတ် မှတ်လို့တောင် မရတော့တဲ့အခြေအနေပါ။
ဒါဟာ လူထုတိုက်ပွဲ အစပါ။ ဒါတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ ဆိုတာတော့ တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။ ဒါဟာ ဒေါ်စုနဲ့ အာဏာရှင်တိုရဲ့ ဖက်လှဲတကင်း အကျိုးစီးပွားတွေကို အနှောက်ယှက်ပေးမယ့် အရာ တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတော့ မသုံးစေချင်လှဘူး။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ် ကိုယ့် သမိုင်း ကိုယ်ရေးကြတာ ကောင်းပါတယ်။
သူတို့တတွေ ဘုရားတွေမှာ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့နေတာတွေဟာ ကောင်းတဲ့အလုပ်၊ ဘာသာရေးအလုပ်ကို လုပ်နေတာထက် ရည်မှန်းချက် အများကြီးပိုတယ်ဆိုတာကို မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း ထောင်မကြောက်တန်းမကြောက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အရေးတော်ပုံတွေကို မမေ့လျော့ဘူးဆိုတာ ပြသဖို့၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့အ တွက် နိုင်ငံရေးအရ တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေပါ။ သူတိုရဲ့နောက်မှာ မမြင်နိုင်စွမ်းတဲ့ လူထုထောက်ခံမှု အားတွေ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ လူထုခေါင်းဆောင်အမည်ခံထားတဲ့ ဒေါ်စုထက် သူတို့တာဝန်ကိုသူတို့ ပိုသိကြသူတွေပါ။ ဘယ်သူမှ ပေးအပ်မထားတဲ့ တာဝန်တွေကို တာဝန်သိသိ သူတို့ထမ်းဆောင်နေကြတာပါ။
ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ပြတ်သားတဲ့စကားကို ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး ပြောတဲ့အတိုင်းလည်း လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဟိုတ မျိုး ဒီတမျိုး ပြောနေတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါ။ ချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းစဉ်တွေအပေါ်မှာလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ လျှောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒေါ်စုနဲ့ အန်အယ်ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာ ၂၃ နှစ်တာကာလတလျှောက်လုံးမှာ ပြည်သူအ တွက် ဘာမှဆောင်ကြဉ်းမပေးနိုင်ဘဲ အခုထိ ပါတီတရားဝင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေး တောင်းဆိုနေတာတွေဟာ လူ ထုလိုအပ်ချက်နဲ့ ဆန်ကျင့်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလွန်းလို့ ထုတ်ပယ်ထားတဲ့ ပါတီတွင်း က တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုတော့ ခေါ်ယူစကားပြောဖို့အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ဘဲ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပေါင်းဖက်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့၊ လူထုလယ်ယာတွေသိမ်းတဲ့ အခွင့်ရေးသမား မက်စ်မြန်မာ ဇော်ဇော် တို့လိုလူတွေနဲ့ အရောတ၀င်နေချင်နေတာကတော့ အတော်လေးကို အကျည်းတန်အရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်။ ဒေါ်စုဟာ ဒီအတွေးအခေါ်တွေလောက်နဲ့ နိုင်ငံရေးသမားမလုပ်သင့်ပါဘူး။
နေ့စဉ် လူထုအသံတွေက ဘာပြောနေလဲ၊ ဘာတွေခံစားနေရလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်ချင်နေလဲဆိုတာကို နားထောင် ကြည့်ပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ လူထုလိုလားတာ တိုင်းပြည် စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က လွတ်မြောက် ဖို့၊ လူအခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရရှိဖို့၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ မြင့်မားဖို့ပါ။ အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီး ရွှေလမ်း ငွေလမ်းဖောက်၊ အတူယှဉ်တွဲ ပေါင်းဖက်ဖို့၊ အာဏာခွဲဝေယူဖို့၊ အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေတဦး က ပြောဖူးတယ်။ ဗုဒ္ဓနဲ့ မာရ်နတ် တူတာ တွဲလုပ်တာ၊ မတူတာ ခွဲလုပ်တာ မရှိခဲ့ဘူးတဲ့။
“ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ဘာမှမပြောချင်ပေမယ့် အာဏာရှင်နဲ့ ပေါင်းဖက်စီးပွားလုပ်နေသူတွေကို ကမ္ဘာကတောင် ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားမပါဘဲ ဆန့်ကျင်အရေးယူနေချိန်မှာ ဒေါ်စုရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါလားဆိုတာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။”
တိုင်းပြည်အခြေအနေက သေရေးရှင်ရေးအနေအထားနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူတွေက အဖမ်းခံပြီး ဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေက ပိုပြီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရချိန်မှာ ဘောလုံးပွဲ ကို အေးအေးဆေးဆေး သွားကြည့်နိုင်တဲ့ ဒေါ်စုဟာ နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်၊ မလုပ် သင့်တဲ့အလုပ် ဆိုတာကိုတောင် ခွဲခြားသိနိုင်သူ မဟုတ်တန်ရာဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ဘာမှမပြောချင်ပေမယ့် အာဏာရှင်နဲ့ ပေါင်းဖက်စီးပွားလုပ်နေသူတွေကို ကမ္ဘာကတောင် ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားမပါဘဲ ဆန့်ကျင်အရေး ယူနေချိန်မှာ ဒေါ်စုရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါလားဆို တာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီကြီးမှာလည်း တကိုယ်တော်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဒေါ်စုဟာ မသိမတတ်တာ မရှိဘူးဆိုပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတာကို ပါတီဝင်တွေ၊ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ နှုတ်ပိတ်နေပေမယ့် မြန်မာပြည်သူလူထုကို ဂ ရုမစိုက် အလေးမထားဘဲ လူထုကို စော်ကားဖို့အထိတော့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒေါ်စုဟာ သာမန် မိန်းမတယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမား၊ ပါတီခေါင်ဆောင်၊ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ၀ိသေသတွေ တပ်ထားခြင်းခံထားရသူပါ။
မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဟာ ငြိမ်ငြိမ်နေကြပါ၊ ကျမ အာမခံပါတယ်၊ အပြောင်းအလဲတွေ မြင်နေရပါတယ်လို့ ပြော နေ၊ အာမခံနေလို့ ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်လှတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ ဒေါ်စုရဲ့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေ။ တတိုင်းပြည်လုံးကိစ္စဖြစ်တယ်။ တိုးတိုးတိတ်တိတ် လုပ်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ တိုင်ပင်ရမယ်၊ အသိပေးရမယ်၊ အများဆုံးဖြတ်ချက်ကို အသိမှတ်ပြုရမယ်။ ဒါမှသာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဖော် ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
အာဏာရှင်ဆီက ဘယ်လိုသဘောတူညီချက် ရတယ်၊ ဘယ်လိုအချက်အလက်ကတော့ လက်ခံလို့ရတယ် ဘယ်လိုအချက်အလက်ကတော့ လက်ခံလို့မရဘူး၊ ညှိနှိုင်းနေတယ်ဆိုတာ သိကိုသိရမယ်။ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ရမယ်။ ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာ နှစ်ကိုယ်ကြား တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဆွေးနွေးခဲ့တာ မရှိခဲ့လေဘူး။ ရှိခဲ့ တယ်ဆိုရင်လည်း အချိန်ကာလတခုမှာ ထုတ်ပြောမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ကိုယ့်ဘက်က တောင်းဆိုမှုတွေရပြီ ဆိုတာတော့ အသိပေးရမှာပဲ။ အခုတော့ ကုလမသဂ္ဂကတောင် မမြင်ရ သေးတဲ့တိုးတက်မှုတွေ ဒေါ်စုက မြင်တွေ့နေရပြီဆိုတာကတော့ လက်ဝါးချင်းပေါင်းရိုက်နေသလားလို့တောင် စဉ်းစားရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။
အရင်တုန်းကလည်း ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နဲ့ ယုံကြည်မူတွေတည်ဆောက်တယ်ဆိုပြီး တိုးတိုးတိတ်တိတ် လုပ်ခဲ့ကြ တယ်။ လမ်းတံတားစီမံကိန်းတွေ သွားကြည့်၊ တပ်မတော်သားတွေကို အားပေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်တွေနဲ့ ကျောင်သားတပ်ဖွဲ့တွေကို စော်ကားတဲ့ အပြုအမူတွေကို လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒေါ်စုကို နိုင်ငံရေးအရ တကယ်ထောက်ခံအားပေးနေတာ ကျောင်းသားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင် ကြည်နဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ တည်ဆောက်နေတာလည်း အချိန်ကာလ မနည်းလေတော့ဘူး။ ယုံကြည်မှုတည် ဆောက်တယ်ဆိုတာ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ရှိရမယ်။ အာဏာရှင် မယုံကြည်မချင်း တည်ဆောက်နေတဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွေဟာ မြန်မာလူထုကို နေ့စဉ် ချောက်ကမ်းပါးစွန်းရောက်အောင် လုပ်နေသလို၊ အာဏာရှင်သက် ဆိုးရှည်ဖို့ အချိန်ကာလဆွဲဆန့်ပေးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် အသုံးချ တောင်ခံဦးမယ်ဆိုပဲ။ ဒေါ်စုကို ခေါင်းဆောင်လုပ်ခိုင်းနေတာပါ။ အသုံးချခံဖို့အတွက် ခေါင်းဆောင်တင်ခဲ့ကြ တာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေး လိုချင်ရင် ကိုယ့်ဖာသာကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်မဲ့ ပုတ်ထုတ်စကား တွေကိုသာ ဟောကြားတတ်လေတော့ စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ဟောပြောတဲ့ စကားတွေမှာလည်း ရှေ့နောက်မ ညီလေတော့ ဆင်ခြင်တုံတရားနည်းစွာ ပြောနေတာလို့ပဲယူဆလာမိပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ အာဏာရှင်တွေ ကို လူထုက တော်လှန်နေချိန်မှာ မြန်မာပြည်က ဘယ်ဟာနဲ့တော့ နှိုင်းလို့မရဘူး၊ ဘယ်ဟာနဲ့တော့ မတူလေ ဘူးဆိုတာမျိုးတွေ ပြောနေတာဟာ ကိုယ့်ဖာသာ အသုံးမကျမှုတွေကို ဖာထေးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံ တကာက တော်လှန်ရေးတွေနဲ့ တူခြင်းမတူခြင်းဆိုတာထက် လူထုလှုပ်ရှားမူကို လက်မခံဘူးဆိုတာတွေကို တွေ့လာရတော့ လူထုခေါင်းဆောင်က မြန်မာပြည်အပြောင်းအလဲကို မဲသမာမှုတွေနဲ့ ရယူထားတဲ့ ကြံ့ဖွတ် တွေနဲ့ပေါင်း လွှတ်တော်တက်ပြီး ပေါင်းလုပ်ရင် ရတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့များ လုပ်နေပါပေါ့လားလို့ စိတ်မသက်သာဖြစ်ရတယ်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို ခေါင်းဆောင်ထားတဲ့ ဒေါ်စုဟာ ၉၀ ရွေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလည်း အသေအချာ မဆုပ် ကိုင်ခဲ့သလို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်တယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ပါလို့ဆိုပြီးမှ ခုတော့ ပါတီကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ခွင့်ရရေး ကြိုးစားနေတာကတော့ ရှက်တတ်ရင် လဲသေလိုက်ဖို့သာ ကောင်းနေပါပြီ။ ဒါမှမဟုတ် ရင် အပြစ်ကင်းချင်တဲ့ သူတော်ကောင်းမကြီးလုပ်ပြီး ဘုရားရိပ်တရားရိပ်မှာ အေးဆေးစွာနေပါတော့။ ဘုရား အလုပ်၊ တရားအလုပ် လုပ်နေတဲ့ သံဃာတွေတောင် အသတ်ခံ အဖမ်းခံပြီး လူထုကျွေးတဲ့ ဆွမ်းတနပ်အ တွက် တာဝန်ကျေနေကြချိန်မှာ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်မသိတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်အမည်ခံထားတဲ့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ရေ ... နိုဘယ်ဆုကို ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ အကြမ်းမဖက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ရှေ့ဆုံးကနေ မားမား မတ်မတ် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက် ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာလောက်တော့ သိသင့်ပါတယ်။
လူထုအုံကြွမှုဖြစ်မှာလည်းကြောက်၊ လူထု လမ်းပေါ်ထွက်မှာလည်းစိုးရိမ်၊ အာဏာရှင်ကို လက်နက်ကိုင်တိုက် မှာလည်း မလိုလား၊ အာဏာရှင်ကို ဒူးထောက်အညံ့ခံပြီး အသုံးချခံဖို့ကိုပဲ စဉ်းစားခဲ့ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်က တည်းက အာဏာရှင်ထံ အညံ့ခံပြီး အပေးအယူလုပ်ခဲ့သင့်ပါတယ်။ အခုတော့ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေအ တွင်းမှာ လူထုဘ၀တွေ အဆိုးဆုံးအခြေအနေ ရောက်နေတာတွေကို မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ မမြင်နိုင်ရင် မလုပ် နိုင်ကြောင်း ၀န်ခံလိုက်ပါ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးထဲမှာ မပါဝင် မပတ်သက်ပါနဲ့တော့။ သတ္တိရှိရှိနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ ကို အားပေးပါ။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးကို သေးသိမ်အောင် မလုပ်မိပါစေနဲ့။ လူထုအုံကြွမှုကို ဘယ်သူကမှ လုပ်ကြံဖန်တီးလို့ မရသလို တားဆီးလို့လည်း ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ။
(၄ နှစ်မြောက် ရွှေဝါရောင်နှစ်ပတ်လည်နေ့က လှုပ်းရှားတက်ကြွခဲ့ကြသူတွေကို ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြု လေးစားမှုနဲ့ ရေးသားပါ သည်။)
Posted by ကိုပေါ on Friday, September 30, 2011
Labels: sharing Comments: (48)
ရှေ့ကပို့စ်မှာ လာရေးသွားတဲ့ မှတ်ချက်တွေထဲက ဒီမှတ်ချက်တခုဟာ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ အချက်တွေ ပါတဲ့အလျောက် ပို့စ်အနေနဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရေးသူ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျနော်မသိပါ။ TYK လို့ အတုိုကောက် အမည်ကိုသာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနေ့ကပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မေးခွန်းတွေ မေးရမယ်လို့ မှာကြားသွားတဲ့အလျောက် ဈေးဦးပေါက်အနေနဲ့ သူမကိုပဲ ဦးတည်လိုက်ပါတယ်။
မနေ့ က ဒီပို့ စ်ကို ဖတ်မိပြီး ဗွီအိုအေမှာ သွားနားထောင်မိတယ်။ ဒီမနက် ဗွီအိုအေ နောက်ဆုံးသတင်းအကျဉ်းမှာလည်း သတင်းဖတ်သွားတာ ကြားလိုက်တယ်။ တခြား ဘီဘီစီ ဒီဗွီဘီ အာအက်ဖ်အေ မြန်မာသတင်းတွေမှာ မကြားမိဘူး။ တခြား မြန်မာဆိုဒ်တွေမှာလည်း မတွေ့ မိဘူး။
ဒီသတင်းဟာ ထူးခြားတယ်ဆိုတာထက် အရေးကြီးတဲ့သတင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုပေါရဲ့ဒီပို့ စ်ကို လာပြီး ကွန်မန့် ပေးကြသူတွေက အဓိက အကြောင်းအရာ ပေါ်မှာ ထင်မြင်ချက်ပေးတာ မတွေ့ ရဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီလမ်းကြောင်းပေးတဲ့စကား (အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်တာဟာ ရှေ့ကို ခရီးရောက်နိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ဖြစ်တယ် )ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အင်န်အယ်လ်ဒီ) က ဒီလမ်းကြောင်းကို တရားဝင်အောင် အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ တာဝန်ပေးချက်သဘောဖြစ်အောင် ဆုံးဖြတ်ပေးရင် ကြံ့ ဖွံ့ အစိုးရထဲ ၀င်လုပ်မယ် ဆိုတာပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီသဘောထားကို ဘာလို့ နိင်ငံခြားသတင်းဌါန တစ်ခုကနေ ပြောတာလဲ။ ကိုယ့်ပါတီထဲမှာ စီအီးစီထဲမှာ ဆွေးနွေးဖြစ်လား။ ဆွေးနွေးတော့ အများစုက သဘောမတူလို့ဒီလိုပြင်ပ မီဒီယာကနေ ထုတ်ပြောပြီး ကိုယ့်ပါတီက သဘောတူအောင် ပြောလိုက်တာလား။ ဖိအားပေးနည်းတခုလား။ အစိုးရအဖွဲ့ ထဲ ဘယ်လိုပါဝင်မှာလဲ။ တယောက်ထဲပါမှာလား ကိုယ့်ပါတီက တခြားပါတီခေါင်းဆောင်တွေကော ပါမှာလား။ အစိုးရအဖွဲ့ ထဲ ၀င်လုပ်ပါလို့သိန်းစ်ိန်အစိုးရက နှစ်ကိုယ်ကြား ကမ်းလှမ်းထားပြီလား။ ဘယ်အဆင့်က ပါခွင့်ရမှာလဲ။ ၀န်ကြီးလား၊ ဒု ၀န်ကြီးလား၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ထဲမှာလား၊ ပြည်နယ် တိ်ုင်းဒေသကြီးအဆင့်ထဲမှာလား။ ဒီလိုပါနိုင်ဖို့ ပါတီမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့ လိုလား။ ဦးသိန်းစိန်က တိုက်ရိုက်ခန့် တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်လား။ အဲဒီလိုကော ပါလို့ ရလား။ အစိုးရအဖွဲ့ ထဲပါဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အန်န်အယ်လ်ဒီပါတီရဲ့ ဘယ်အဆင့်က ဆုံးဖြတ်ပေးမှာလဲ။ စီအီးစီလား။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င် မ၀င် ဆုံးဖြတ်တုန်းကလို ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကလား။ အစိုးရသစ်ထဲက အပြောင်းအလဲလိုလားတဲ့ အင်အားစုတွေဆိုတော့ သူတို့ ဟာ အင်အားစုဆိုတဲ့အဆင့် အရေအတွက်တစုံတရာ ရှိတယ်လို့ ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲ။ ဘယ်လောက် ကိုယ်နဲ့ ဆက်ဆံဖူးတာ ရှိခဲ့လဲ။ အစိုးရအဖွဲ့ ထဲ ကိုယ်ဝင်ပါတာနဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်မှာ ဘယ်လောက်သေချာလဲ။ အစိုးရသစ်ထဲက အပြောင်းအလဲ လိုလားတဲ့ အင်အားစုတွေ အားကောင်းလာအောင် ဒီမိုကရေစီအရေး လိုလားသူတွေက ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ကြိုးစားပေးရမှာလဲ။ ဘယ်လို တာဝန်ရှိတာလဲ။ ကြိုးစားပေးနိုင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ထဲက လူတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလိုလားသူတွေရဲ့ဆက်သွယ် ဆက်ဆံ ပြောဆိုနိင်တဲ့ နေရာက ဘယ်မှာလဲ။ အစိုးရသစ်က ဒီမိုကရေစီရေး လိုလားသူ ဘယ်နှစ်ယောက်ကို ဆက်သွယ် ဆက်ဆံ ပြောဆိုနေလဲ။ တနိုင်ငံလုံးကိုလား၊ တပါတီလုံးကိုလား၊ တယောက်တည်းကိုလား။
ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်မျိုးကို ကိုယ့်ပါတီထဲမှာ သဘောထားကျအောင် ချပြီး မှန်တယ်ထင်ရင် ရဲရဲလုပ်သင့်ပါတယ်။ လူများစု မသိနိုင်တဲ့ သတင်းဌါနတခုကနေ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ ကာတင်ပစ်ပြီး ကိုယ့်ပါတီကို တွန်းအားပေးလိုက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်နေသမျှ ကိုလည်း ပါတီက ထောက်ခံနေတာပဲ မဟုတ်ပါလား။ အစိုးရသစ်ထဲ ၀င်လုပ်ဖို့ ကိစ္စကျမှ ပါတီဆုံးဖြတ်ချက် ဘာလို့ တောင်းနေလဲဆိုတာ မစဉ်းစားတတ်ပါ ။
September 28, 2011 11:22 AM
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, September 28, 2011
Labels: general Comments: (20)
ဒီကနေ့ ဗီအိုအေ ညပိုင်းအစီအစဉ်မှာ အောက်ပါသတင်းကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။
“အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်တာဟာ ရှေ့ကို ခရီးရောက်နိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အင်န်အယ်လ်ဒီ) ကသာ ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောလိုက် ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့သစ်ထဲက အပြောင်းအလဲလိုလားတဲ့ အင်အားစုတွေ အားကောင်းအောင် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ဒီမိုကရေစီအရေး လိုလားသူတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဂျပန်ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းဌာန အင်န်အိပ်ခ်ျကေက တနင်္လာနေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်းထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောထားပါတယ်။ ”
(ဗီအိုအေ၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ ညပိုင်းအစီအစဉ်)။
ဒီသတင်းကိုကြားရတဲ့အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က မလွတ်မြောက်ခင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးသော သူမ၏ သဘောထားနဲ့ မှာကြားချက်ကလေးတွေကို ကြံစည်စေ့စေ့ တစိမ့်စိမ့် အောက်မေ့လှသဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှာကြားသော အချက် (၆) ချက်”
၁။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လုံးဝလက်မခံနိုင်၊ အဖွဲ့ချုပ်၏ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ကို ကိုင်စွဲ ထားရမည်။
၅။ ပြည်သူ လူထုကို ပြောကြား လိုတာက မိမိ တတ်နိုင်သလောက် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ကြိုးပမ်းမှုကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက် သွားမည်။
ကျနော်ကတော့ ကိုသန်းလှိုင်ရဲ့ “စကားပြောကောင်းတဲ့ မသည်းအူ” သီချင်းကို အခုတလော မကြာခဏ ဆိုဖြစ်နေပါကြောင်း။
သူ့အပြောတွေ ကောင်းနေခဲ့လို့ သူ့အပေါ်မငြူစူ…
ပြေးကြည့်ပြီးမှ ယုံမယ် မသည်းအူ။
၂၆ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁။
Posted by ကိုပေါ on Monday, September 26, 2011
Labels: general Comments: (29)
“တော်စမ်းပါ၊ ကျော်ဆန်းရာ... နင့်ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားစမ်းပါ” တဲ့။
ဒီနေ့မနက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲဝင်လိုက်တော့ ကြည့်လိုက်ရတဲ့ သီချင်းလေးကို သဘောကျတဲ့အတွက် ကျနော့်ဘလော့ဂ်လာဖတ်သူတွေ နားထောင်ရအောင် ထပ်မံ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို “ရဲရင့်ငယ်” အင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ မျက်နှာစာအုပ်မှာ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း ယူကျုကို ကြည့်လို့ရပြီဆိုတော့ ဒီလို သီချင်းလေးတွေ များများ ထွက်လာရင် ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။
ဖန်တီးသူရဲ့ စိတ်ကူး၊ သီဆိုထားတဲ့လူရဲ့ အသံနဲ့ စာသားလေးတွေကို ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ နားဆင်ကြည့်ကြပါဦး။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, September 24, 2011
Labels: sharing Comments: (3)
“လျှပ်စစ်အား အသုံးများတဲ့အပြင်၊ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ထက်အောက်မြေခွင်၊ သစ်ပင်တွေ မြေတွင်းဓါတ်တွေ၊ ဖော်ယူနိုင်စွမ်း တတ်ကျွမ်းကျင်”
အခုတလော ရုံးသွားရုံးပြန် လမ်းလျှောက်ရင်း ခါတိုင်းဆိုနေကျ ဆရာမြို့မငြိမ်းရဲ့ လူချွန်လူကောင်းသီချင်းလေး ဆိုညည်းချင်ရင်တောင် ဘေးဘီကို အရင်ကြည့်ရသေးတယ်။ လူမသမာတွေ ကြားသွားမှာစိုးလို့။
ဆရာမြို့မငြိမ်းတို့ ခေတ်ရှေ့ပြေးတယ်ဆိုတာ ယုံလိုက်တော့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုဝက်လောက်က စပ်ဆိုခဲ့တဲ့သီချင်း။ အခုအချိန်ထိ ခေတ်နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျရှိတုန်း။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားတွေ။ မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတတွေ၊ သစ်ပင်တွေ၊ မြေတွင်းဓါတ်တွေ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေ ဖော်ယူနိုင်စွမ်း တတ်ကျွမ်းကျင်လွန်းလို့ ပြောင်တလင်းခါတော့မယ်… ဆရာ။
ဒါပေမယ့် “ကမ္ဘာမကြေ” အစချီတဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းကတော့ နည်းနည်းလေး အနုစိတ်ဖို့ လိုသွားတယ်ထင်တယ်။ “ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ ဒို့ကာကွယ်မလေ။ ဒါဒို့ပြေ၊ ဒါဒို့မြေ၊ ဒို့ပိုင်တဲ့မြေ၊ ဒို့ပြေ၊ ဒို့မြေ”။ သီချင်းထဲမှာ “ဒို့ရေ၊ ဒို့မြစ်၊ ဒို့လျှပ်စစ်၊ ဒို့သဘာဝဓါတ်ငွေ့” လို့ အသေးစိတ် ထည့်မစပ်ခဲ့တော့လည်း တိုင်းပြည်ကို အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်ပါမယ်လို့ သစ္စာဆိုထားသူတွေကိုယ်တိုင်က…. ပြည်တွင်းမှာ သုံးမကုန်အောင် ပိုလျှံနေလို့ပါ ဆိုပြီး ရောင်းစားခံရတော့တာပေါ့။ ( ပြောလိုက်သေးတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ငါ့ထက်သိတဲ့လူတော့ မရှိတော့ဘူး....ဆိုပဲ။ ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကဆို ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့ ဧတဒဂ်ရမယ်ထင်တယ်။)
တကယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝ သနားဖို့တော့ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်ပြေ၊ ကိုယ့်မြေပေါ်မှာနေရင်း လယ်သူရင်းငှားဘဝမျိုးရောက်နေရတာကလား။ ကိုယ့်မြေကထွက်တဲ့ သယံဇာတတွေ၊ အကျိုးအမြတ်တွေမှန်သမျှ ကိုယ်မခံစားရဘဲ တိုင်းတပါးက လာပြီး ခြစ်ခြုတ်ယူနေတာကို ခံရတယ်။ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာလေးလိုပေါ့။
“တို့ ရွာတို့ မြေ၊ တို့ ရွာမြေဝယ်
တောကပြိတ္တာ ဖြစ်မည်တည်း။ ဆိုတဲ့ အတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါတွေအားလုံးဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ။ တရားခံကဘယ်သူလဲ။ အကြောင်းရင်းကို ဉာဏ်မီသလောက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ ကိုဇာဂနာကြီး ပြောခဲ့ဖူးတာကို ပြေးသတိရမိတယ်။
အခုက ရန်သူမျိုးငါးပါးမဟုတ်တော့ဘူး။ ရန်သူမျိုး သုံးပါးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်း။ (ရေနဲ့မီးကလွဲလို့ ကျန်တဲ့သုံးပါးကို တပါးတည်းပေါင်းပြီး တွက်လို့ရသွားပြီဆိုတဲ့သဘော)
Posted by ကိုပေါ on Friday, September 23, 2011
Labels: general Comments: (3)
ညီမလေးက အချစ်ကို ကိုးကွယ်သတဲ့လား
ပြီးရင် ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်ကိုင်စားမှာတဲ့
(၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁)
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, September 21, 2011
Labels: Poem Comments: (33)
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ဘဲ မီးဖွားလုိုသော မိခင်များအတွက်
လွတ်လပ်မှုကုို လုိုလားသည်ဆုိုလျက် လူထုလှုပ်ရှားမှုများကုို သေးသိမ်အောင် ပြောကြားသူများသည်...
မထွန်ယက်မစုိုက်ပျိုးဘဲ ရ်ိတ်သိမ်းလုိုသူများ၊ မုိုးချုန်းသံနှင့် လျှပ်လက်ခြင်းများမပါဘဲ မုိုးရွာခြင်းကုိုတောင့်တသူများ၊ လှိုင်းပုတ်သံများ မပါသည့် သမုဒ္ဒရာကုို အလုိုရှိသူများသာ ဖြစ်ကြကုန်၏။ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရဖြစ်စေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးလုံးအရဖြစ်စေ လှုပ်ရှားမှု တုိုက်ပွဲကတော့ ရှိကုိုရှိရမည်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တောင်းဆိုမှုမရှိက အာဏာရှင်တုို့မည်သည် စုိုးစဉ်းမျှ လုိုက်လျောလေ့မရှိ။ ယခင်ကလည်း မရှိခဲ့။ နောင်လည်း ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်။
"Those who profess to favor freedom and yet depreciate agitation…want crops without plowing up the ground, they want rain without thunder and lightening. They want the ocean without the awful roar of its many waters…. This struggle may beamoral one, or it may beaphysical one, and it may be both moral and physical, but it must beastruggle. Power concedes nothing withoutademand. It never did and it never will."
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, September 20, 2011
Labels: general Comments: (19)
ညာသံပေးပြီး တက်လာတဲ့ ရန်သူတွေအကြား
စက်တင်ဘာ ၁၉။ ၂၀၁၁
Posted by ကိုပေါ on Monday, September 19, 2011
Labels: Poem Comments: (4)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အဖြေများကို သုံးသပ်ခြင်း (၂)
ဒီတပို့စ်အတွက်တော့ အာရ်အက်ဖ်အေ အသံလွှင့်ဌာနက ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့က ထုတ်လွှင့်သွားခဲ့တဲ့ “လူထုနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” အမေးအဖြေကဏ္ဍတ က အမေးအဖြေ တခုကို ရွေးထုတ် တင်ပြချင်ပါတယ်။
မေးသူ ။ ။ ဦးတင်မောင်ဝင်း (စင်္ကာပူနိုင်ငံ)
မေးခွန်း ။ ။ ဒေါ်စု ခင်ဗျာ့။ ကျနော်ကတော့ တင်မောင်ဝင်းပါ။ ကျနော် အခုတွေ့နေရတာက ဒီဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အစိုးရကို အခုရက်ပေါင်း ၁၀၀ ရှိတဲ့အခါမှာ မကျေမနပ်နဲ့ ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေကို တွေ့နေရပါတယ်။ သူတို့ကို နည်းနည်းလေးများ အချိန်ပေးပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှ ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပိုပြီးတော့ သင့်တော်မလားလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒေါ်စုအနေနဲ့ ဘယ်လိုများထင်ပါသလဲခင်ဗျာ့။ နောက်တခု ကတော့ ကျနော်တို့ ဒီပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ကနေပြီးတော့လည်း ဒီ NLD ရဲ့ ပါတီရပ်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ အမိန့်ကြော်ငြာစာတွေဘာတွေ ထုတ်နေတာကို တွေ့နေရပါ တယ်။ နောက်တခါ ဒေါ်စုအနေနဲ့ကလည်း လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် NLD ရဲ့ စည်းရုံးရေးအင်အား၊ နောက် နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ NLD အပေါ်မှာထားရှိတဲ့သဘောထားတွေက အင်မတန်မှကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာကို မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒေါ်စုအနေနဲ့ ခရီးထွက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် အစိုးရနဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ အခုလို တိုးတက်မှုတွေ ရရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေများ ဆုံးရှုံးနေမလားလို့ ကျနော်တို့ယူဆမိပါတယ်။ ဒေါ်စုအနေနဲ့ ဘယ် လိုများ သဘောထားပါသလဲခင်ဗျာ့။
အဖြေ ။ ။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်အစိုးရမဆို အချိန်ပြည့်အဝေဖန်ခံဖို့ အဆင် သင့် ဖြစ်ရမှာပါ။ ရက် ၁၀၀ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၁၀ ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရက် ၁၀၀၀ ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဝေဖန်ချက် တွေကို ရင်ဆိုင်ရမှာ ဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောတရားပါပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင် အများရဲ့ဝေဖန်သုံးသပ် ပိုင်ခွင့်ကို လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့လည်း မိမိကိုယ်ကို ခုခံပြောဆိုပိုင်ခွင့်တွေက ရှိပြီးသားမဟုတ် လား။ ကျမအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအလုပ်သဘောတရားအရ သင့်တင့် သလို ခရီးထွက်တာဟာ တာဝန်တခုဖြစ်သလို၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ချင်လို့လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ကိုကိုကို တွေ့ဆုံးပြီး ညှိနှိုင်းဖို့ မေတ္တာရပ်ခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းမှာ ဖြေကြားခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဖြေကိုတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ သဘောတူညီမှုရှိပါတယ်။ ကျနော့်အမြင်အရ နည်းနည်းတောင် ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုပါသေးတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်အစိုးရမဆို အချိန်ပြည့် အဝေဖန်ခံဖို့ အဆင့်သင့်ဖြစ်ဖို့ လိုသလို နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့လည်း လက်ရှိအစိုးရရဲ့ မူဝါဒတွေနှင့် လုပ်ရပ်များကိုလည်း ပြည်သူအများသိသာစေရန် ဖော်ထုတ်ဝေဖန်ပြောကြားရမယ့် တာဝန်ဝတ္တရားရှိပါတယ်။
သို့ပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက် ဒီတခါနေအိမ်အကျယ်ချုပ်က ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်များကို ဝေဖန်တယ်ဆိုတာ မကြားရသလောက် နည်းပါးသွားပါပြီ။ (မေးခွန်းမေးသူ ဦးတင်မောင်ဝင်းရဲ့ အကြံပြုချက်ကို လက်ခံသွားလေသလားတော့မသိ။) သူမအနေနဲ့ လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်သမျှဟာလည်း အိတ်ဖွင့်ပေးစာ၊ ပန်ကြားလွှာ၊ တိုက်တွန်းချက် အဆင့်မျှသာ ကျန်တော့တာကို သတိပြုမိပါတယ်။ ဒါဟာ လက်ရှိအစိုးရလုပ်သမျှမှာ ဝေဖန်စရာမရှိတော့လောက်အောင် အဖက်ဖက်က ကောင်းမွန်တိုးတက်နေတာကြောင့် မဝေဖန်တော့တာလို့ ထင်နိုင်စရာအကြောင်းတော့ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာအရပ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ၊ ဂျာနယ်များပေါ်မှာ နာမည်ရင်းနဲ့ ရေးသားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်တဲ့ ပြည်တွင်းက (ဆရာဝန်၊ သတင်းသမား၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ၊ ကဗျာရေးသူ၊ စာရေးဆရာ) စတဲ့ကလောင်ရှင်များရဲ့ ဝေဖန်ချက်များကတောင် အတော်လေးပိုမိုပြင်းထန်ပြီး ချက်ကျလက်ကျရှိလှတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်ရှိအစိုးရအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေကို မတွေ့ရတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဘယ်လိုနှောင်ကြိုးမျိုးက သူမကို တုပ်နှောင်ထားတဲ့အတွက် ယခုလို ပွင်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ရန် ဝန်လေးနေသလဲဆိုတာကို ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာလျှင် သိနိုင်မှာပါ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ မှန်းဆစိတ်ကူးကြည့်ရုံသာ တတ်နိုင်ပါတယ်။
တခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လက်ရှိအစိုးရတို့ရဲ့ “မတူတာတွေဖယ်ထား၊ တူတာတွေ ပေါင်းလုပ်ကြမယ်” ဆိုတဲ့ အချက်ကလည်း စဉ်းစားစရာပါ။ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ အာဏာရအစိုးရတစ်ရပ်အကြား တိုးတက်မှုတစုံတရာရရှိရေးအတွက် တူတာတွေ ပေါင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုတာကတော့ ယေဘုယျ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ သို့သော် မတူတာတွေ ဘေးဖယ်ထားဆိုတဲ့ မူအရ ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေ၊ ဝေဖန်သင့်ဝေဖန်ထိုက်တာတွေကိုတောင် ဘာမှ ထုတ်ဖော်မပြောတော့ဘဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြီး မျိုချနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားနေတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယဖြစ်စရာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတိတ်က ရေးခဲ့တဲ့၊ ပြောခဲ့တဲ့ သဘောတရားတွေနဲ့လည်း ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားမှာ) ပြောကြားသွားတဲ့ “မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ရှိနေပြီ” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ပါ။ ဒီစကားဟာ ဒီအချိန်မှာ ပြောဖို့ အင်မတန်စောလွန်းသေးတယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ ယူဆပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီအစိုးရဟာ (အရင်က စစ်အစိုးရ၊ ယခု အရပ်ဝတ်အစိုးရ)ဟာ သူတို့ရဲ့ ကတိစကားတွေကို အကြိမ်ကြိမ် မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ ချိုးဖောက်လေ့ရှိတဲ့ အစိုးရ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ၂၀၀၂ခုနှစ်၊ မေလက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လွတ်လာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စစ်အစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြား ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်မြောက်ခဲ့ပြီး ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဆဲကာလတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဝီကီပီဒီယားက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာမျက်နှာမှာ Aung San Suu Kyi proclaimed "a new dawn for the country". “တိုင်းပြည်အတွက် အရုဏ်သစ်ကျင်းပါပြီ” ဆိုတဲ့ စကားကို အဲဒီ ၂၀၀၂ ကာလများဆီက လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောခဲ့ဖူးတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသည်ဆွေးနွေးပွဲပျက်ပြီးတဲ့နောက် ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းအပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်သာ ပြန်ကျခံခဲ့ပေမယ့် အဲဒီတုန်းက ဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့သလဲဆိုတာ ပြည်သူများအနေနဲ့ ယခုအချိန်အထိ ရေရေရာရာ သိရှိခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။
တဖက်မှာလည်း မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ အမှန်တကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေကို အကောင်အထည်အဖြစ် သိသာထင်ရှားစွာ ဖော်ဆောင်ပြခြင်း မရှိသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ဥပဒေဆိုတာနဲ့ ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်တွေ ချဆဲ။ လယ်သမားတွေရဲ့ လယ်တွေ၊ ရာဘာခြံတွေကို မတရားသိမ်းယူနေဆဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေကို ထိုးစစ်ဆင်နွှဲဆဲ။ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဆက်လက်ထောင်ချထားဆဲ။ စာပေစိစစ်ရေးနဲ့ သတင်းစာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်ထားဆဲ။
ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ “ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေကို ရောက်နေပြီ” ဆိုတဲ့အပေါ် ကျနော့်အနေနဲ့တော့ ယုံကြည်ရန် အင်မတန်ခဲယဉ်းနေပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က စီအီးစီ အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်ကတောင် “မယုံကြည်နိုင်တဲ့သူတွေထဲမှာ ကျနော်တို့တောင်ပါမလားမသိဘူး” ဆိုတဲ့သဘောမျိုး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတခုမှာ ပြောသွားပါတယ်။ သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတောင် ခြေစုံပစ်ပြီး ယုံလိုက်သူ လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ၂၃ နှစ်လုံးလုံး ဒုက္ခအဝဝကို ခါးစည်းခံခဲ့ကြရပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေဆိုတာမျိုးကို အိပ်မက်ထဲမှာတောင် မထားဝံ့ကြသူတွေအဖို့မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောလိုက်တဲ့ “ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေ”ဆိုတာ ရေနစ်နေသူတွေအတွက် လှမ်းဆွဲလိုက်စရာ ကောက်ရိုးလေးတမျှင်လို၊ ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်နေတဲ့ ဒုက္ခအမှောင်ထုကြီးထဲကို လက်ကနဲ ကျရောက်လာတဲ့ အလင်းရောင်တန်းကလေးလို အင်မတန်မှ စုံမှိတ်ပြီး အားပြုလိုက်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတာကို ကျနော့်အနေနဲ့ နားလည်ခံစားကြည့်လို့ ရပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ယုံချင်ပေမယ့်လည်း မယုံရဲဘူးလို့ဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။ “Those who do not remember the past are condemned to repeat it” ဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိတယ်မဟုတ်လား။ မြန်မာလိုတော့ “အတိတ်ကို မမှတ်မိတော့တဲ့သူတွေဟာ အတိတ်က အမှားတွေကို ထပ်လုပ်မိဖို့ ကျိန်စာသင့်ခံနေရသူများသာဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့သဘော။ အခုလည်း အဖြစ်အပျက်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ကိုးနှစ်လောက်ကလိုပဲ ဆင်ဆင်တူနေတာမို့ သမိုင်းဘီးတပတ်လည်ပြန်လည်လာတယ်လို့များ ဆိုရမလားမသိ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သမိုင်းဘီးတပတ်လည်တယ်ဆိုလို့ ကျနော်နှစ်သက်တဲ့ ABBA အဖွဲ့ရဲ့ Waterloo ဆိုတဲ့ သီချင်းလက်ဆောင်လေးနဲ့ပဲ ဒီပို့စ်ကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, September 18, 2011
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၃ နှစ်လောက်က အသက် ၄၂ အရွယ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက် မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာခိုက် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးနဲ့ ကြုံကြိုက်ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (နဝတ) ဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရမှာ ပါဝင်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စောင်းပါးရိပ်ခြည် ပြောတတ်တဲ့) လက်သုံးစကားက “နိုင်ငံအတွက် မြက်ကလေး တပင်တောင် နှုတ်မပေးခဲ့ဘူးတဲ့သူက နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ချင်လို့ ရမလား” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေ ပါပဲ။ ဒီစကားမျိုးကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ သုံးစွဲတာ အံ့သြစရာတော့ မရှိလှပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအပါအဝင် အရာရှိအရာခံ အကြပ်စစ်သည် အချို့ဟာ နိုင်ငံကို သူတို့သာ အချစ်ဆုံး။ သူတို့သာ အပေးဆပ်ဆုံးလူတွေလို့ ယူဆထားကြသူတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ လမ်းဘေးက ကြွေးကြော်သံဆိုင်းပုဒ်ကြီးတွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ရေဒီယို၊ တီဗီတွေမှာ နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ “အသက်သွေးချွေး၊ စဉ်မနှေး၊ ပေးဆက်သည်မှာ တပ်မတော်ပါ” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်က သူတို့ရဲ့ ခံယူချက်ကို အထင်းသားဖော်ပြနေပါတယ်။
မြန်မာ့အသံ စစ်သည်တို့လိုရာ ကဏ္ဍမှာ မကြာခဏထုတ်လွှင့်တတ်တဲ့ ရီရီခင်ရဲ့ သီချင်းတပုဒ်ရှိပါတယ်။ သီချင်းအဓိပ္ပါယ်က… ဟိုးပင်ယံအမြင့်မှာ ငွားငွားစွင့်စွင့်၊ ကြွားကြွားဝင့်ဝင့် ပွင့်နေပြီး လေယူရာ မွှေးရနဲ့တွေဆင်နေတဲ့ လျှမ်းတင့်တဲ့ ပန်းပွင့်ငွေသဇင်တခက် ရှိတယ်ပေါ့။ အဲဒီ ငွေသဇင်ကို…. တံချူရှင် တဦးဦးက ဓနဂုဏ်၊ အလှဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်ကြွယ်တယ်ဆိုပြီး လာချူခဲ့ရင် ကိုယ့်လူတို့ရေ…. ရလိမ့်မယ်လို့ မထင်နဲ့…. လွမ်းလျက်သာစော မောတာသာ အဖတ်တင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘော ရေးစပ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် သီချင်းအဆုံးမှာတော့ အဲဒီငွေသဇင်က…
"ဗမာ့သားကောင်းသာဖြစ်ပစေ….ဗမာ့သားကောင်းသာ ဖြစ်ပစေ…..တံချူတွေတောင် ဆောင်ဖို့မလိုပါရှင်…. ဆီးကြိုလှည့်…. ဆင့်ကာ ဝင့်ကာ… ကြွေကျလာမယ်ရှင်"….တဲ့။ ဗမာ့သားကောင်းဇာနည် စစ်သားကြီးသာဖြစ်လို့ကတော့ ငွေသဇင်က ပင်မြင့်ထက်ကနေ အော်တိုမက်တစ် ကြွေကျလာပေးမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
ဒီသီချင်းကို စစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေ အတော်ကြိုက်ပုံရတယ်။ ဗမာ့သားကောင်းတို့၊ သားကောင်းဇာနည်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရတွေကို သူတို့ မောင်ပိုင်စီးထားတာကိုး။ ဒီတော့လည်း ဒီသီချင်းကို စစ်အစိုးရ တက်လာကာစ အချိန်က ရေဒီယိုနဲ့ တီဗီမှာ မကြားချင် မမြင်ချင်အဆုံး။
အေးလေ…. သူတို့မပြောနဲ့။ ငယ်ငယ်က စစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေကိုမှ သူရဲကောင်းထင်မိတဲ့ ကျနော်တောင် တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်ချင်လွန်းလို့ ဆယ်တန်းအောင်ရင် စစ်တက္ကသိုလ်တက်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ချက်ကြီး ထားခဲ့ဘူးပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကဆိုရင် ရွာမှာ အလှူခံ အသံချဲ့စက်က ဖွင့်တဲ့ “စစ်သားကြီးလုပ်မယ်၊ တိုင်းပြည်အန္တရာယ် ရန်စွယ်များကို၊ တွန်းလှန်ဖြိုဖျက် တွန်းလှန်ဖြိုဖျက်မယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းများလာရင် လိုက်ဆိုရတာ အမောပါပဲ။
ဒါတွေဟာ ဒီကနေ့ အတွေးအမြင်၊ အယူအဆနဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် ရယ်စရာကြီးပါ။ စစ်တပ်ထဲဝင်မှ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာလည်း အင်မတန် တိမ်တဲ့အတွေးအခေါ် အယူအဆ ဆိုတာကို အရွယ်ရောက်သူလူတိုင်းက နားလည်သဘောပေါက်နေကြပါပြီ။ အထူးသဖြင့် စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ နဲ့ သူတို့ရဲ့ အပေါင်းပါတွေ အကျင့်ပျက်ပြီး တိုင်းပြည်ကို လက်ညှိုးထိုး ရောင်းစား ဖျက်ဆီးနေတာ မြင်ရတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ပိုလို့တောင် အော့နှလုံးနာနေကြပါသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး ပြီးဆုံးလို့ နှစ်ပေါင်း ၂၃ လောက်ကြာလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာ စောစောက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ လက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့ “တိုင်းပြည်အတွက် မြက်ကလေး တပင်တောင် နှုတ်ပေးဘူးလို့လား” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုး ထွက်တဲ့ စကားတွေကို မထင်မှတ်တဲ့ နေရာက ကြားလာရပြန်ပါတယ်။
ဒီတခါ မေးကြတာက စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သူ အတိုက်အခံတော်လှန်ရေးသမားလို့ အမည်ခံထားကြသူ လူတွေထဲက မနူးမနပ်တွေက မေးကြတာပါဗျား။ (မနူးမနပ်လို့ ရေးရတာက ရင့်ကျက်တဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်တုန်းကမှ အဲသည်လို မပြောကြလို့ပါ။) အတိုက်အခံတွေရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်မိရင်၊ သူတို့လေးစားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဝေဖန်မိရင်၊ သူတို့နဲ့ သဘောအမြင်မတူညီတာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမိရင် “မင်းက နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက်ပေးဆပ်ခဲ့လို့လဲ၊ မင်းဘယ်လောက် ပေးဆပ်ခဲ့လို့ ဝင်ပြောရတာလဲ” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေ၊ ဘလော့ဂ်ကွန်မင့်တွေ မကြာခဏ ကြားရ ဖတ်ရတတ်ပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်က တိုင်းပြည်အတွက် တစုံတရာ မပေးဆပ်ခဲ့ရင် ဝင်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး၊ အသာ ပါးစပ်ပိတ်ထား။ ပေးဆပ်ခဲ့သူကသာ ပိုမိုပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဘောလေလားတော့ မသိဘူး။ ဒီလိုသဘောနဲ့ ပြောတာသာ မှန်ခဲ့ရင် အဲဒီ အယူအဆဟာ အင်မတန် ချွတ်ချော်မှားယွင်း တိမ်းစောင်းနေတဲ့ အယူအဆလို့ မြင်မိပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ အနှစ်လေးဆယ်လောက် ခေါင်းမြီးခြုံအိပ်ပျော်နေခဲ့စေဦးတော့…. (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တောင် ၄၂ နှစ် အရွယ်ရောက်မှ နိုင်ငံရေးထဲ စပြီး ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကို သတိပြုပါ။) သူတရေးလန့်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ သူတိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို သူမြင်တဲ့အလျောက် သူ့အယူအဆကို နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းမှာ ပါဝင်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်၊ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ပါပဲ။
သူပြောတာ မှားချင်မှားမယ်။ မှန်ချင်မှန်မယ်။ သူပြောတာမှားရင် သူ့ကို ပြန်ပြီး ဝေဖန်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်လို့ မရသလို သူ့မှာ မပေးဆပ်ခဲ့လို့ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ လုံးလုံး မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ တန်းတူရည်တူ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါကို လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတွေက ပိုလို့တောင် သဘောပေါက်သင့်ပါသေးတယ်။
လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို အသားကျနေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို ဘယ်သူမှ မမေးကြတော့ပါဘူး။ လူထုက တင်မြှောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိုလည်း သာမန်လူကစလို့ Talk Show Host တွေအဆုံး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝေဖန်နေကြတာဟာ အဆန်းတကြယ်ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါဘူး။
နောက်ပြီး “ပေးဆပ်တယ်၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံတယ်” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောစရာတွေရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ သူ့အနေနဲ့ “ပေးဆပ်နေရတယ်၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံနေရတယ်လို့ မပြောချင်ပါဘူး။ ဒီလမ်းကို သူလျှောက်တာဟာ သူ့ရွေးချယ်မှု” လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့စကားကို ကျနော် လုံးဝသဘောတူပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ တခါက ပို့စ်တင်ဖူးပါတယ်။ အခု ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲ ကျနော့်အယူအဆကို နည်းနည်း ထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ်။
စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ အင်မတန် တင်းကြပ်ဖိနှိပ်တဲ့အလျောက် စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ရင်း ထောင်တန်း နှစ်ရှည်လများ ကျသွားကြတဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မတရားအကျဉ်းကျခံနေရမှုကို ကျနော်စာနာပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ မတရားမှုကိုလည်း ကျနော် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့သူတယောက် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါ အဲဒီလို အကျဉ်းကျခံခဲ့ရတာကို သူ့ရဲ့ ပေးဆပ်မှု တခုသဖွယ် ကျနော့်ကို လာပြောခဲ့ရင် ကျနော် အသိအမှတ် ပြုချင်မှပြုမယ်။ အကျဉ်းကျခံခဲ့ရတာသက်သက်နဲ့တော့ ကျနော့်ရဲ့ ထောက်ခံမှု၊ လေးစားမှုကို အလိုအလျောက် ရမှာမဟုတ်။ သူ့ရဲ့ အယူအဆ၊ ရပ်တည်ချက်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား စတာတွေအပေါ်မှာ ကျနော့်စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါမှ ကျနော့်ရဲ့ လေးစားမှုနဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကို ဘာကြောင့်ရေးရသလဲဆိုရင် အချုပ်ထောင်က ထွက်လာဖူးတဲ့ အချို့သောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ထောင်ထွက်လက်မှတ်ကြီးတွေကို သူတို့ ပေးဆပ်မှုရဲ့ သက်သေသက္ကာယကြီးတခုလို လူတွေ့တာနဲ့ ထုတ် ထုတ် ပြတတ်ကြပါတယ်။ သူများတွေတော့မသိ။ ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ အဲသည်လို ထုတ်ပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် အဲဒီလူအပေါ်မှာ အထင်ကြီးစိတ်ဟာ တဝက်လောက် လျော့ကျသွားပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ကျနော်ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ အဲသည်လို လူမျိုးတွေဟာ ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ နိုင်ငံရေးသိက္ခာမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လျှောက်လုပ်တာကို တွေ့မြင်ရတော့တာပါပဲ။ (စင်္ကာပူမှာ နေထိုင်စဉ်အတွင်း သုံးယောက်လောက် လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူးတယ်။) ဒီလူမျိုးတွေကိုတော့ ထောင်ထဲမှာ အနှစ် ၂၀ နေခဲ့လည်း သူမတရား ထောင်အချခံခဲ့ရတာအတွက် စာနာ၊ ဂရုဏာသက်မိတာ၊ စစ်အစိုးရရဲ့ မတရားမှုကို ရှုတ်ချတာမိကလွဲလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ သူ့ကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုဖို့၊ ခေါင်းဆောင်တင်မိဖို့ရန် အင်မတန် ခဲယဉ်းပါတယ်။
ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမဆို လက်ရှိ အချိန်အတွက်တော့ သူ့ရဲ့ လက်ရှိလုပ်ရပ်ကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်စံနှုန်းနဲ့ ချိန်ထိုးဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ကောင်းတာလုပ်ရင် အဲဒီကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်အတွက် ထောက်ခံမယ်။ ကျနော့်စံနဲ့ မကိုက်ညီတာကို တွေ့ရင် မထောက်ခံဘူး။ ဝေဖန်သင့်တယ်ထင်ရင် ဝေဖန်မယ်။
လူတယောက်ကို တခါ ထောက်ခံဘူးတာနဲ့ ရာသက်ပန် ဘာလုပ်လုပ် ထောက်ခံသွားမှာ မဟုတ်သလို၊ တခါ ဆန့်ကျင်ဖူးတာနဲ့ တသက်လုံး ဘာလုပ်လုပ် ဆန့်ကျင်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ… မိုးသီးဇွန်ကိုဆိုရင် ကျနော်မထောက်ခံတဲ့ အပိုင်းတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလုပ်သမျှကို လိုက် ဆန့်ကျင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ မိုးသီးဇွန်ရေးထားတဲ့ “နာခံမှုကို ဆန်းစစ်ခြင်း” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ကျနော်အင်မတန်နှစ်ခြိုက်တဲ့အတွက် ဘလော့ဂ်ဘေးမှာတောင် လင့်ခ်တင်ထားပေးပါသေးတယ်။ အလားတူ ထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ ဆောင်းပါးကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ဘလော့ဂ်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပေမယ့် ထွန်းအောင်ကျော် လုပ်သမျှကို အကုန်လိုက်ထောက်ခံနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သတိရလို့ ပြောရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တခါက ပြောခဲ့ဘူးတာလေးရှိတယ်။ “အန်တီတို့က ထာဝရလူဆိုး၊ ထာဝရလူကောင်းဆိုတာကို မယုံကြည်ဘူး။ ပြုပြင်လို့ မရသေးတာပဲ ရှိတယ်” (စကားလုံး အတိအကျတော့ မဟုတ်)။ ဒီစကားကို ကျနော် နှစ်သက်လက်ခံတယ်။
တချို့ လူကောင်းဆိုတဲ့လူတွေတောင် တဒင်္ဂ အခိုက်အတန့်လေးမှာ စိတ်မထိန်းနိုင်တဲ့အတွက် လူသတ်မှုလို ကြီးမားတဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေ ကျူးလွန်မိတတ်တဲ့ ဥပမာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အလားတူ တသက်လုံးဆိုးလာတဲ့ လူဆိုးပေမယ့် တခါတလေမှ အင်မတန်ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်ကို လုပ်သွားတဲ့ ဥပမာတွေလည်း ရှိနေပြန်တယ်။
ဒီတော့ လူတယောက်ဟာ လူဆိုးဖြစ်တဲ့အတွက် သူဘာလုပ်လုပ် ဆိုးမှာပဲ၊ အမြဲလူဆိုးလို့ သတ်မှတ်ထားရင် နည်းလမ်းကျမယ်မထင်ဘူး။ ဖြစ်သင့်တာက လူဆိုးဖြစ်စေ၊ လူကောင်းဖြစ်စေ သူရဲ့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ချီးမွန်းစရာရှိရင် ချီးမွန်းမယ်။ ဝေဖန်စရာရှိရင် ဝေဖန်မယ်။ ရှုတ်ချစရာရှိရင် ရှုတ်ချမယ်။ ဒါဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ဘဲ တရားကို ကြည့်တဲ့သဘော။ ပုဂ္ဂိုလ်ကို မခင်ဘဲ တရားကို မင်တဲ့သဘော။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ပုဂ္ဂိုလ်စွဲနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာကြောင့် အဂတိတရားမကင်းဘဲ မှားမှားယွင်းယွင်း ဆုံးဖြတ်မိဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများတတ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…. ဒီဘဝမှာတော့ “တိုင်းပြည်အတွက် မြက်တပင်နှုတ်ပေးဖူးရဲ့လား”လို့ မေးမြန်းတတ်တဲ့ မြက်နှုတ်သမားများကို ရှောင်လွှဲချင်လို့မရ လူဖြစ်တုန်းအခိုက် ကြုံကြိုက်ရဦးမှာပါပဲ။
စက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၁။
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, September 13, 2011
(လမ်းပြကြယ်စာကြည့်တိုက်(စင်္ကာပူ)၏ နှိုးဆော်စာကို မူရင်းအတိုင်း တင်ပြပါသည်။)
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အစပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဆုံးသတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတို့တို့သာပိုင်ဆိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့မိခင် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးသည် သေလောက်အောင်လည်မြိုညှစ်ခြင်းကို စတင်ခံနေရပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မေခ၊ မလိခ နှင့် ဧရာဝတီကိုဖြတ်ပတ်၍ ဆည် ၇ခု ဆောက်လုပ်နေပြီးဖြစ်သည်။ (ရရှိလာသောလျှပ်စစ်ဓါတ်အား၏ ၉၉% ကို တရုတ်ပြည်သို့တင်ပို့မည်ဖြစ်သည်) ထိုဆည်များပြီးသွားပါက ဧရာဝတီ၏ ဗေဒင်မေးစရာ၊ လေ့လာရေးပြုလုပ်နေရန်ပင်မလိုတော့ပါ၊ အနှေးနဲ့ အမြန်သေဆုံးခြင်းသို့ ရောက်ရတော့မည်သာဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်က မြစ်ဝါမြစ်ဟာ ကျနော်တို့အတွက် အကြောင်းဆုံး ဥပမာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မြစ်ဝါမြစ်သာမက ယခု ဗီယက်နမ်၏ အဖြစ်ကိုလည်း လေ့လာစေလိုပါသည်။ မဲခေါင်မြစ်ဝကျွန်ပေါ်ဒေသကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကမ္ဘာ့ဆန်အတွက်ဆုံးနိုင်ငံတခု- ယခု မဲခေါ်မြစ်ရေနည်းလာမှုကြောင့် ရေချို ရေငံမျှခြေပျက်ပြီး ရေငံပိုမိုဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် စပါးစိုက် ဧကများစွာ ထာဝရပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီ။
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းပြီးလျှင် မြစ်ဆုံဒေသနှင့် မြစ်လည်ဒေသကို ထည့်မပြောနဲ့အုံး၊ ဆည်စီမံကိန်းနဲ့ အဝေးဆုံး မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသပါ အတိဒုက္ခရောက်ကြတော့မည်ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီမြစ်ရေ ပင်လယ်ထိရောက်အောင် မစီးဆင်းနိုင်ခဲ့သော်.................................
မြန်မာပြည်တွင် ဘဘဦးဝင်းတင်တို့ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသာမက၊ နာမည်ကျော်သတင်းစာ ဆရာကြီးများ၊ ကိုကျော်သူ၊ မရွှေဇီးကွက်၊ ဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင်တို့ ကဲ့သို့ လူမှုရေးလုပ်ဆောင်နေသူများပါမကျန် အမျိုးသားရေးတရပ်အနေနှင့် ဝိုင်းဝန်းလက်မှတ်ရေထိုး ကန့်ကွက်နေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စင်္ကာပူရောက်မြန်မာများအနေနှင့်လည်း ယခုလိုအမျိုးသားရေးကိစ္စကို အဘယ့်ကြောင့် လက်ရှောင်နေကြမည်နည်း။
ကျွနု်ပ်တို့၏ အမျိုးစားရေးအားမာန်နှင့် သတ္တိကို ပြသရန် အချိန်ကြရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ကြောက်၍လက်ရှောင်ခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂါတ်မျိုးဆက်အတွက် ဧရာဝတီကို ဒဏ္ဍာရီမြစ်တစင်းအဖြစ်သာ လက်ဆောင်ပေးနိုင်ကြတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
လက်မှတ်ရေးထိုးလိုသူများ - လမ်းပြကြယ်စာကြည့်တိုက်
Peninsula Plaza (04-09)
စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ချိန်များ - - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ - ညနေ ၆-၃ဝ မှ ည ၉ နာရီ
စနေနေ့ - နေ့လည် ၂ နာရီ မှ ည ၉ နာရီ
တနင်္ဂနွေနေ့ - နေ့လည် ၁၂ နာရီ မှ ည ၉ နာရီ
အမျိုးသားရေးအတွက် စိတ်အားထက်သန်သူများလာရောက် လက်မှတ်ရေးထိုးကြရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ တဦးချင်းမလာနိုင်သူများ ဤ PDF file ကို Print ထုတ်၍ စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး လမ်းပြကြယ်သို့ လာရောက်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Posted by ကိုပေါ on Monday, September 12, 2011
Labels:ိdistribution Comments: (1)
စက်တင်ဘာ ၁၂။ ၂၀၁၁
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အဖြေများကို သုံးသပ်ခြင်း (၁)
လွတ်လပ်သော အာရှအသံ ရေဒီယို (RFA) တွင် သောကြာနေ့တိုင်း လွှင့်ထုတ်နေကျ ဖြစ်သော လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေးအဖြေကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သော အမေးအဖြေများမှ နည်းနည်းချင်း ထုတ်နှုတ်သုံးသပ်ပြသွားပါမည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညင်းမြို့နယ်မှ စိုင်းအောင်ဘ (မေးခွန်း)။…………….။ အန်တီစုကို ကျနော်မေးခွန်းတခု မေးချင်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့တဲ့ကိစ္စမှာ ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် ဖိတ်ကြားတာလား။ NLD က ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်တွေရဲ့ သဘောတူညီချက်ကော ရရဲ့လား။ အဲဒါလေးလည်း သိချင်ပါတယ်။ နောက်တခုက နေပြည်တော် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ သုံးရက် ကျင်းပတဲ့အထဲက ဒုတိယနေ့ တရက်ပဲတက်ပြီး နှစ်နာရီပဲ နေခဲ့တဲ့ အနေအထားက ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲ။ အဲဒါလေး သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အဖြေ)။………..။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကို သွားတွေ့တယ်ဆိုတာ မဖိတ်ဘဲနဲ့ လုပ်လို့ ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျေနပ်ထောက်ခံကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ခဏပဲ တက်တာက ပြန်လာစရာ ကိစ္စ ရှိနေလို့ပါ။
ဤမေးခွန်းကို မေးသူ ဦးစိုင်းအောင်ဘ၏ မေးခွန်းမှာ အပိုင်း သုံးပိုင်း ပါဝင်ပြီး သုံးပိုင်းစလုံး အလွန်တရာ ဆီလျော်၍ မေးမြန်းသင့်သော မေးခွန်းဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါအချက်များအရ သုံးသပ်မိပါသည်။
သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နှင့် ၂၀ ရက် တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော စီးပွားရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တက်ရောက်ရန် ကျင်းပရေးကော်မတီရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကို ၁၈ ရက်နေ့ကမှ အဖွဲ့ချုပ်က ရရှိကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်း၏ ပြောကြားချက်ကို မဇ္ဇျိမ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအချိန်အထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မည်လော၊ မတက်ရောက်မည်လောကို ဦးဉာဏ်ဝင်းမသိသေးကြောင်း ပြောပြထားပါသည်။
တဖန် ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေပြည်တော်သို့ သွားသည့်အခါ ဆဲဗင်းဒေး သတင်းဂျာနယ်အား ပြောကြားချက်မှာ “အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဦးမြင့်က ဖိတ်လို့ လာပါတယ်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သတင်းအပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ဖတ်ကြည့်ပါရန်။
စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရန် ဦးမြင့် ဖိတ်ကြားခဲ့
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၂
နေပြည်တော်တွင် တွေ့ရသည့် ဦးမြင့် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ-AP)
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ရခြင်းမှာ စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးမြင့်က ဖိတ်ကြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယနေ့ ပြောလိုက်သည်ဟု 7Day သတင်းဂျာနယ်၏ သတင်းတပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဦးမြင့်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သိကျွမ်းသူတဦး ဖြစ်သည့်အပြင် သမတဦးသိန်းစိန်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအရာရှိလည်း ဖြစ်သည်။
နေပြည်တော်တွင် ရောက်ရှိစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယမန်နေ့က သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ၂ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယနေ့ နံနက်ပိုင်းကလည်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ခေတ္တ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
"ဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျေနပ်ပါတယ်။ အခု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကလည်း ဦးမြင့်ဖိတ်လို့ လာခဲ့တာပါ။ ကျေနပ်အားရပါတယ်"ဟု နေပြည်တော်တွင် သတင်းထောက်များကို ပြောကြားလိုက်သည်ဟု 7Day ဂျာနယ်သတင်းတွင် တွေ့ရသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဖိတ်ကြားခြင်းသည် သမ္မတနှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံရန် ဖိတ်ကြားခြင်းမဟုတ်ဟု နားလည်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ကလည်း သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံရန်ဖိတ်ကြားသည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ထိုမှတပါးလည်း ဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်း၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရပ်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တောင်းဆိုချက်အရ စီစဉ်ပေးခဲ့ရကြောင်းဟု ဆိုခဲ့ရာ…..
ကိုစိုင်းအောင်ဘ မေးခွန်းပထမပိုင်းမှာ အလွန်တရာ မေးမြန်းသင့်လှသော မေးခွန်းတခုပင်ဖြစ်သည်။ ထိုမေးခွန်းအတွက် ပါတီခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ထားသော အဖြေမှာ “သမ္မတက ဖိတ်ကြားခြင်း ဟုတ်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် မဟုတ်ပါ” ဆိုသည့် ရိုးရှင်းသော အဖြေမျိုးကိုသာ မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် “နိုင်ငံတော်သမ္မတကို သွားတွေ့တယ်ဆိုတာ မဖိတ်ဘဲနဲ့ လုပ်လို့ ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။” ဟု ဖြေကြားသွားပါသည်။ သူမ၏ အဖြေမှာ ပါတီခေါင်းဆောင်တဦး၏ အဖြေနှင့်မတူဘဲ ရပ်ကွက်ထဲမှ သာမန်လူတဦးက အငေါ်တူးဖြေကြားသည့်သဖွယ် ဖြစ်နေပါသည်။
အဓိကအနေဖြင့် သူမ၏အဖြေမှာ လုံးဝမှန်ကန် ပြီးပြည့်စုံသည့်အဖြေလည်း မဟုတ်ပါ။ သမ္မတ ဖိတ်ကြားခြင်းမရှိသော်လည်း အရေးကြီးသောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေဖြင့် တွေ့ခွင့်တောင်းပြီး တွေ့နိုင်ပါသေးသည်။ ထို့ပြင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် စကားစမြည်နှုတ်ဆက်ပြောကြားရင်းမှ (လေပေးဖြောင့်၍) ရုံးခန်းတွင် သွားရောက် စကားပြောကြခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်သေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပထမပိုင်းအား ဒေါ်စုဖြေကြားပုံသည် ပါတီခေါင်းဆောင်တဦးအနေနှင့် ဖြေကြားသင့်သည့် ပုံစံမဟုတ်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ သတိပြုရန်အချက်မှာ ဤမေးခွန်းများကို ဒေါ်စုသည် လေလှိုင်းပေါ်တွင် အချိန်နှင့် တပြေးတည်း (Live) ဖြေဆိုရသည်မဟုတ်ဘဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာ ဖြေဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မေးခွန်း ဒုတိယအပိုင်းကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မဖြေကြားဘဲ ရှောင်ထွက်သွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မေးခွန်းမှာ “NLD က ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်တွေရဲ့ သဘောတူညီချက်ကော ရရဲ့လား။” ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့အရေးကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ သဘောတူမတူ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အဖြေမှာ “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျေနပ်ထောက်ခံကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။” ဟူ၍ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ မိုးမခတွင် ဖော်ပြခဲ့သော တူမောင်ညို၏ သုံးသပ်ချက်ကို သဘောကျသည့်အလျောက် အောက်တွင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
သြဂုတ်လ၂၂ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ (NLD) ၏ ကြေညာချက်(၁၅/၀၈/၁၁)ကို ဖတ်ရပါ တယ်။ သြဂုတ်လ၁၅ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ (NLD)၏ ကြေညာချက်(၁၄/၀၈/၁၁) ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပါတယ်။
“ကြေညာချက်”က ထုတ်ဖေါ်လိုသည့် ပထမဆုံးအချက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်များကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ (NLD) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က“သဘောတူကြိုဆိုထောက်ခံပါကြောင်း” ဆိုသည့်အချက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်များသည် စိုးရိမ်နေကြသလိုတစ်ကိုယ်တော်ဆောင်ရွက်ချက် မဟုတ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က သိရှိပြီး/ တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ် ဟူသော အချက်ကို ပေါ်လွင်စေလိုသည့်ဆန္ဒလည်းရှိပုံရပါတယ်။
တွေ့ဆုံခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်များအပေါ် “ဝမ်းမြောက်အားရမှုနဲ့ ကျေနပ်ဝမ်းသာမှု” ရှိတယ်လို့ ကြေညာချက်က ဖေါ်ပြပါတယ်။
“အဘယ့်ကြောင့်” ယင်းသို့ “ဝမ်းမြောက်အားရမှုနဲ့ ကျေနပ်ဝမ်းသာမှု”များဖြစ်ရတာကို ပါတီဝင်များ၊ မဟာမိတ်များ၊ ပြည်သူ များထံသို့လည်း မျှဝေသင့်သည်မဟုတ်ပါလော။ အသိပေးသင့်သည်မဟုတ်လော။ အစီရင်ခံသင့်သည်မဟုတ်ပါလော။
သို့မှသာ ပါတီဝင်များ၊ မဟာမိတ်များ၊ ပြည်သူများရှင်းလင်းစွာနားလည်သိရှိပြီး တက်တက်ကြွကြွဝန်းရံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော “ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း”တွင် ဖေါ်ပြထားတဲ့ “အဖွဲ့ချုပ်၏ ရပ်တည်ချက်များ” မှ အချက် ၃ ခုကိုသာ ကွက်ပြီး အမှတ်တရ ပြန်လည်ဖေါ်ပြရပါလျှင် -
(က) ဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ခြွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရေး၊
(ခ) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေး၊
(ဃ) ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုရေး၊
သို့သော်လည်း NLDပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လက်သုံးစကားမှာ“ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ယခုအချိန်မှာ မပြောနိုင် သေးပါ” တဲ့။ ။
(စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၁ )
Posted by ကိုပေါ on Sunday, September 11, 2011
Labels: general Comments: (26)
မြစ်ဆုံမှာ ဆည်ဆောက်ရုံမျှနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး တိမ်ကောနိုင်ပါ့မလား။
ဒီမေးခွန်းက ကျနော့်ခေါင်းထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ မေးခွန်းများထဲက တစ်ခုဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်ယူရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ရေတွန်းအားရရှိစေရန်၊ ရေပမာဏများလာစေရန် ဆည်ဆောက်ပြီး ရေကို ခေတ္တ တန့်သည့် သဘောမျှဖြစ်သည်။ ပြီးလျှင် ထိုရေသည် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ တာဘိုင်ဒလက်များကို ဖြတ်သန်းပြီးသည့်အခါ ဧရာဝတီ မြစ်ထဲသို့ပင် ပြန်လည် စီးဝင်မည်။ ထိုမြစ်ရေကို လုံးဝရပ်တန့်သွားအောင် တားရန်မူကား မဖြစ်နိုင်။
နောက်စဉ်းစားရန်တချက်မှာ ဧရာဝတီမြစ်သည် မေခ နှင့် မလိခ မြစ်နှစ်သွယ်တွင် မြစ်ဖျားခံလာခဲ့သည် မှန်သော်လည်း ချင်းတွင်းမြစ်အပါအဝင် မြစ်လက်တက်၊ ချောင်းလက်တက်များစွာ စုဆုံ စီးဝင်လာသည့် မြစ်ကြီးဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် ဆည်ဆောက်ရုံမျှဖြင့် မြစ်ကောသွားနိုင်ပါမည်လော။ လောပိတ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကြောင့် ဘီလူးချောင်း တိမ်ကောသွားသည်ဟုတော့ မကြားမိ။
ဆည်များတည်ဆောက်ပြီးသည့်အခါ မိုးများပြီး ဆည်ရေမြင့်တက်လာသည့်အချိန်မျိုးတွင်မူ ရေကို ဖောက်ချရသည့် ကိစ္စများရှိနေသည်။ ရေကာတာ အနီးပတ်ဝန်းကျင် အနိမ့်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော လူနေမြို့ရွာများကို ရေလွှမ်းခံရမည့် အန္တရာယ်ကတော့ အမှန်တကယ်ပင်ရှိသည်။
ဤကား မြစ်ဆုံရေကာတာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျနော့်ခေါင်းထဲ ပထမဦးဆုံး ဝင်ရောက်လာသော အတွေးများ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲ အတွေးများ ရှိပါသေးသည်။
မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် လှုပ်ရှားမှုတရပ် ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ပေါ်ပေါက်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျနော်ဖတ်ရှုတွေ့မြင်ရသလောက် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြသူများသည် (၁) သဘာဝ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး ရှုထောင့်မှလည်းကောင်း (၂) ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက် အမျိုးသားအမွေအနှစ် မပပျောက်ရေး ရှုထောင့်မှသော်လည်းကောင်း (၃) ရေကာတာ ပတ်ဝန်းကျင် မြို့ရွာများ ရေလွှမ်းခံရမည့် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရေး ရှုထောင့်မှသော်လည်းကောင်း ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ကျနော်သည်လည်း ယခု ရေကာတာ ဆောက်လုပ်မည့်အရေးကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လိုသူ တဦးပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျနော်ကန့်ကွက်လိုခြင်းမှာ အထက်ပါ အကြောင်းများကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါ။ ရှင်းပါဦးမည်။
ပထမဦးဆုံး အချက်မှာ ဤရေကာတာစီမံကိန်းကို စတင်ခဲ့သည့်အစိုးရမှာ လူထုက ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့သည့် လူထုအစိုးရမဟုတ်ဘဲ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က တရားမဝင် အာဏာသိမ်းပြီး တက်လာသည့် စစ်အစိုးရဖြစ်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လူထုအစိုးရမဟုတ်သဖြင့် ဤသို့သော စီမံကိန်းများကို ပြုလုပ်ရန် ထိုအစိုးရတွင် အခွင့်အာဏာမရှိပါ။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ထိုအစိုးရသည် စစ်အစိုးရပီပီ လူထုအား ချပြတိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ လူထုသဘောထား စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းမရှိဘဲ ထိုစီမံကိန်းကို ၄င်းတို့သဘောသက်သက်ဖြင့် တရုတ်အစိုးရနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုကာ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တတိယအချက်အနေဖြင့် ထိုရေကာတာစီမံကိန်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံမှ ရရှိမည့် ဓါတ်အားအများစုကို အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသည့် မြန်မာပြည်သူများက ခံစားခွင့်မရှိဘဲ တရုတ်ပြည်သို့ ရောင်းစားသည့်အချက်မှာလည်း အတော်ပင် နည်းလမ်းမကျသည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်သုံးချက်သည် ယခုလောလောဆယ် တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို ကျနော့်အနေနှင့် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများဖြစ်ပါသည်။
အမှန်တကယ် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျစွာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော လူထုအစိုးရတရပ် (ယခု ကြံ့ဖွံ့အစိုးရမျိုးမဟုတ်) တက်ရောက်လာသည့်အချိန်တွင်လည်း ကျနော်တို့တိုင်းပြည်၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များအရ မြစ်ဆုံဒေသအပါအဝင် မြန်မာပြည်တဝှမ်းရှိ မြစ်ချောင်းများတွင် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများကို ဆောက်လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုသို့သော စီမံကိန်းများကို စတင်ခြင်းမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအနေနှင့် လူထုသဘောထားစစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၏ အစီရင်ခံစာများကို အလေးဂရုပြုခြင်း၊ လွှတ်တော်အတွင်း အတည်ပြုချက်အတွက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
ဤရေကာတာစီမံကိန်းသည် မြန်မာပြည်အတွင်းတွင် ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြား စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ပြဿနာအများစုနည်းတူပင် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးစနစ် (နိုင်ငံရေးအရလွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှု)ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖန်တီးယူခြင်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဆိုသည့် အချက်ကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သည့် ဥပမာကောင်းတခုပင် ဖြစ်တော့သည်။
(စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD နှင့် ဂငယ်ကွေ့